mai 2018 - Page 3 sur 66 -
Fananganana governemanta vaovao : Tratry ny aretin-tseza koa ny fiarahamonim-pirenena
Samy manao izay ho afany amin’ny fitadiavan-tseza avokoa, na ireo avy amin’ny mpanohitra, na ireo mpikambana ao anatin’ny fiarahamonim-pirenena sasany taorian’ilay didy navoakan’ny Hcc ny amin’ny tsy maintsy hananganana governemanta iraisana hivoahana amin’izao krizy izao. …Tohiny
Didin’ny HCC : Voafitaka sy voarebireby ireo mpanaraka ny solombavambahoaka 73
Mpitari-bato vilam-bava, hafa ny lazain’ny vava, hafa ny ataon’ny tanàna. Azo lazaina ho voafitaka tanteraka amin’izao fotoana ireo voalaza fa mpitolona etsy amin’ny kianjan’ny 13 Mai. Raha ny tatitra isan’andron’ireo solombavambahoaka amin’ireo mpanara-dia azy mantsy …Tohiny
Fifandonana tany Vondrozo : Dahalo 13 maty voatifitra
Dahalo miisa 13 no indray lavon’ny Kalony tao anatin’ny fifandonana niseho tany Vohitrandria, fokontany Sosobahy, kaominina Karianga, distrikan’i Vondrozo ny marainan’ny 29 mey lasa teo. Araka ny nambaran’ny teo anivon’ny Zandarimariam-pirenena, dia tonga nanafika tanàna …Tohiny
Fikambanana Ambalambahoaka : Tsy manaiky ny fanaovana sorona ny mpianatra
Manoloana ny fitokonana ataon’ireo sendikan’ny mpampianatra eny amin’ny minisiteran’ny Fanabeazam-pirenena dia nidina teny ihany koa ny fikambanana Ambalambahoaka manohitra ity fanakorontanana ity. Nambaran’izy ireo nandritra izany fa tsy tokony atao takalon’aina ny zaza malagasy amin’izao …Tohiny
Ho lavalava ny faran’ny herinandro ao anatin’ny fanamarihana ny fetin’ny fahaleovantena. Toy ny isan-taona, toerana maromaro eto an-drenivohitra sy any amin’ny faritra no mandray ny fety aman-danonana na ny « Podium ». Ny alatsinainy 26 jona izao ...Tohiny